”ဖိနပ်ဖိုး” | သက်ဆုံးနှင်း
”ဖိနပ်ဖိုး”	January 4, 2011
4 Responses to “”ဖိနပ်ဖိုး””
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းအောင် သရုပ်ဖော်နိုင်စွမ်းရှိတယ် ချီးကျူးတယ်သိလား
ဆောင်းပါးတွေကို မဂ္ဂဇင်းအတွက် ရေးသလို ၀တ္ထုတိုတွေရော ပို့သေးလား.
အောင်မြင်တဲ့ ကြယ်လေးတစ်ပွင့် ဖြစ်လာပါစေ။
မကြီးရေ…. စာလာဖတ်သွားပါတယ် ရောက်အောင်လာသွားတယ်နော်
အပိတ်ကလေးကို သည့်ထက် ကောင်းအောင် ကြိုးစားလိုက်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ..။